IDaimler E-Fuso Vision One, ilori yokuqala yombane ilapha | Iindaba zeGajethi
Ngelixa belindile Iindaba ze-tesla kunye nelori yayo yombane, iDaimler yaseJamani sele ibeke unobumba wayo phezu kwetafile. Igama lakhe ngu Umbono we-E-Fuso. Oku kuyakuba likhonkco lokuqala leyokuqala ukwahlulwa kwelori yombane eziza kubeka iinkampani ezindleleni zethu. UDaimler ukhona kwiTokyo Motor Show kwaye kulapho ke ebonisa khona ezinye iindlela ngamandla ahlaziyekayo.
Kuyinyani ukuba iimoto zithatha ikeyiki kweli candelo. Nangona kunjalo, zininzi ezinye iindlela - ezinye zazo sele zikho kwimarike - zikwicandelo lezithuthuthu kwaye, okubaluleke ngakumbi, ziilori. UDaimler uphawule njalo Lo ngumsebenzi nomsebenzi wecandelo lawo «Mitsubishi Fuso Iinkuphelostencils kunye Bus Corporation». Kwaye kwikota elifutshane neliphakathi bafuna ukuba zonke iinqwelo-mafutha zibe nombane ngokupheleleyo.
Kodwa sigxile kumbono wokuqala weFuso-E, sinokukuxelela ukuba yilori enokubamba umthwalo weetoni ezili-11 ubuninzi. Kwangokunjalo, ukuzimela kwayo kubalwa njenge inokufikelela kwiikhilomitha ezingama-350 ngalo mthwalo uye phezulu. Ibhetri enikezelwa yile lori yombane kaDaimler ine Umthamo wama-300 kWh, nangona amanani engakhange anikezelwe ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana intlawulo epheleleyo ngenkqubo yokutshaja ngokukhawuleza njengoko kusenzeka ezimotweni. Lumka, kuba iDaimler icacile: olu hlobo lwetraki alwenzelwanga ukusetyenziswa kweemoto ezinde; usemninzi umsebenzi wolu hlobo lohambo. Ngoku, ukuba bajolise kwiilori zokuhambisa umbane, ngokuqinisekileyo izixeko ziya kuphumelela ngendawo eluhlaza kunye necocekileyo.
Ngeli xesha, amanani anqabileyo anikezelwe ukuba ingakanani imali esinokuyisebenzisa sisebenzisa olu hlobo lwetekhnoloji kwiilori. Kuyabonakala, Umbono we-E-Fuso One unokugcina i-euro eyi-1.000 qho kwiikhilomitha ezingama-10.000. Ubuncinci yile nto ezinye iinkampani ezizenzileyo iimvavanyo zokulinga kwiinkonzo zemihla ngemihla ziye zakwazi ukungqinisisa.
Iinkcukacha ezithe vetshe: Daimler
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IDaimler E-Fuso Vision One, ilori yokuqala yombane ilapha
Yeyiphi eyona mobile ihamba nexabiso elifanelekileyo lemali kwintengiso?
I-Somfy ibeka enye yezona thermostats ziqhagamsheleneyo kwintengiso